Shumba hadzi dzine tuna - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Lyonnaise ne tuna
Zvinokanganisa40 maminitsi20 vanhu
Chokwadi vazhinji venyu vakatoona kuti zviri nyore sei kugadzira Lyonnaise neThermomix®. The choux pastry ndiro rakareruka; ruomba, upfu uye zai. Tinowanzovapedza ne kuzadza zvinotapira zvakanaka ingava keke cream, kirimu kana truffle. Asi panguva ino tichavazadza mune imwe kirimu ine munyu kutishandira seanotapira.
Iyi ndiyo imwe yemabikirwo atinogona kufunga nezvayo pakuronga yedu menyu yekisimusi. Zviri nyore sekugadzirira shumbakadzi svondo rapfuura, kudziomesa nechando uye husiku husati hwadya unodzirega dzichinyungudika. Ivo vakazadzwa neiyo tuna cream uye vakagadzirira kubudirira!
Tinogona kuzvipa kuvaenzi vedu vachiperekedzwa nevamwe appetizers, nzungu, magaka ...
1 Lyonnaise ne tuna
Dzimwe shumba hadzi dzakazadzwa nekirimu ine munyu.
Kubika nguva: 10M
80 g yeupfu hwepastry
130 g yemvura
1 zai yolk
2 tablespoons sesame mbeu
100 g yetuna (maviri madiki tangi)
¼ supuni yemon zest
1 uye ½ tablespoons crème fraîche
Isu tinoisa akati wandei matireyi ekubikira nebepa regreaseproof kana zvakafanana.
Tinodurura bhotela, mvura, shuga uye munyu mugirazi. Isu purogiramu 3 maminetsi, 100º, kumhanya 2.
Tinozarura chivharo uye tinowedzera upfu kamwechete. Isu tinosanganisa panguva Masekonzi mashanu pakumhanya 10.
Rega musanganiswa utonhorere kwemaminitsi mashomanana, uchibvisa girazi kubva panzvimbo yaro.
Apo kutonhora kwakaderera, tinodzorera girazi panzvimbo yayo uye purogiramu kumhanya 4, hapana nguva, uye tiri kuwedzera rimwe nerimwe mazai akarohwa zvishoma nemuromo apo muchina uchishanda.
Patinenge tine mukanyiwa, tinodururira muhomwe yepastry uye tinoita mirwi miduku, kwete yakakwirira kwazvo, pamahwendefa evheni akagadzirirwa kare.
Tinovapenda neii yolk uye tinosasa sesame pamusoro. Tinoisa muchoto kwemaminitsi gumi nemashanu pa 15º.
Pavanenge vachitonhora, tinoita chidimbu chiduku muchikamu chezasi cheshumbakadzi kuti tikwanise kuzadza.
Tinoisa chidimbu cheanyanisi mugirazi uye tinochicheka Masekondi makumi matatu nekumhanyisa 3.
Deredza zvimedu zvakanamatira pagirazi. Isu tinobatanidza bhotela uye purogiramu 5 maminetsi, 100º, chipunu kumhanya.
Mushure menguva, wedzera tuna yakanyungudutswa zvakanaka, lemon zest, cream uye pepper. Isu tinosanganisa panguva Masekonzi mashanu pakumhanya 15.
Zvadaro tinopinza musanganiswa mubhegi repastry rinofanira kuva nehomwe yakamanikana.
Tinozadza shumbakadzi zvakananga pasina kushandisa muromo.
Tinoisa shumbakadzi patireyi uye tinoshumira.
Rangarira kuti, mumatireyi echoto, shumba hadzi dzinofanira kupatsanurwa kubva kune imwe kubva kune imwe kubva kune imwe neimwe kubva padzinenge dzabikwa dzinokura.
Mamwe mashoko - Cream inoruma
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Nyore, Asingasviki 1 awa, Navidad
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Zvinokanganisa » Lyonnaise ne tuna
Mhoroi Mayra, ndaona iyi yekubheka uye inotaridzika zvakanaka panguva imwechete kuti inofanirwa kuve inonaka kwazvo, asi ini ndine duca, ona kana uchikwanisa kundiudza kuti chii chinonzi crème frâiche uye kwandingaiwane kana inogona kutsiviwa nechimwe chinhu. Ndinokutendai zvikuru, ini ndinogara ndichiziva maresipi enyu. Kumbundira.
Chekutanga pane zvese, maita basa nekomendi uye nekutitevera!
Crème fraîche kirimu, yakafanana nekirimu, asi nyowani. Iine chikamu chemafuta pakati pe30 ne40%. Uchaiwana mune chero supamaketi, pakati pemafuta uye mabutter.
Zvisinei, iwe unogona kugara uchitsiva yakaenzana kirimu.
Ester Perez HUELVA akadaro
Mhoroi Mayra, iyi yekubheka inoita senge yakanaka uye nekukurumidza zvakanyanya, sekuvada kwandinoita, asi ndine kusahadzika kwakafanana naAngel, kuti ndione kana uchigona kutibatsira tese. Ndatenda zvikuru nekugovana iyi recipe.
Pindura kuna Ester Perez- HUELVA
Paunenge uchinyora chirevo ini ndanga ndichipindura mibvunzo yako ... izvi zvangoitikawo!
Ndinovimba mhinduro yandakapa ku Angeles inokubatsira!
Mhoro MAYRA NDINODA RECIPE YAKO ASI NDINOFANIRA KUZIVA CHII CHIWANDA CHEMADZIMA MBEU CHINOTORA SEI KUBVA MUENG.
Pindura kune yeya
Ini ndichango chinja iyo recipe. Chokwadi ndechekuti iro rekutanga mabikirwo akashandisa mbeu yefennel, asi pandakagadzira shumba hadzi, dzimwe ndakadzizadza nembeu uye imwe nedanda rakafanana asi risina mhodzi, uye idzo dzisina mhodzi dzakakunda. Saka, kunze kwekunge iwe uri fan of fennel, zvirinani usazviisa.
GOREDZVA RAKANAKA!!!. Vakadii maLyonnais? Isu takavada, zvinonaka. Vaive imwe yemidziyo yedu paNew Year Eve.
Ndiri kufara kuziva kuti iwe wakazvifarira. Zvinofadza kunzwa idzi mhando dzemashoko!
Mhoro Mayra, ndinoda kuti undibvise mukusahadzika,
Hupfu hwepastry hwakajairika, hupfu hwebhisikiti, kana chii?
ndeyekuti muMercadona mune mhando dzakasiyana dzeupfu ...
hupfu hwepastry hweHacendado brand (iyo yeMercadona) ndiyo inoisa hupfu hwegorosi.
soraya f akadaro
Zvinogona kuve nechando nekuzadza here kana kuti iwe unofanirwa kuzadza iwo iwo iwo iwo mazuva auchazovadya? Shuwiro yakanakisa.
Pindura kuna soraya f